Wasiirka cusub caafimaadka dowlada federaalka Soomaaliya oo xilka la wareegay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka cusub caafimaadka dowlada federaalka Soomaaliya oo xilka la wareegay
Wasiiradii hore wasaarada caafimaadka DF Soomaaliya Xaaawo Xasan Maxamed oo xilka ku wareejinaysa wasiirka cusub caafimaadka Maxamed Xaaji Cabdinuur. Sawirka: Radio Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiiradii hore caafimaadka dowlada federaalka Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed ayaa maanta oo Axad ah si rasmiya xilka ugu wareejisay wasiirka cusub ee caafimaadka Maxamed Xaaji Cabdinuur.
Munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday xafiiska Raysulwasaaraha Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka cadaalada Soomaaliya Cabdulaahi Axmed Jaamac (Ilko-jiir) oo ah kusimaha Raysulwasaaraha.
Wasiir ilko-jiir oo ka hadlay munaasabada xilwareejinta ayaa bogaadiyay wasiiradii hore ee caafimaadka shaqadii ay soo qabatay intii ay ahayd wasiirka, sidoo kalena wuxuu kula dardaarmay wasiirka cusub inuu shaqada halkeeda kasii wado daacadnimana uu ugu adeego dalka.
Wasiiradii hore caafimaadka Xaawo Xasan Maxamed iyo wasiiradii kale ee waxbarashada ayaa RW Cumar Cabdirashiid Cali dhawaan shaqada ka cayrshay.